Yurub iyo Shiinaha oo safiirro u soo magacaabay Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Yurub iyo Shiinaha oo safiirro u soo magacaabay Soomaaliya
Safiirrada cusub ee Midowga Yurub Tiina Intelmann iyo dowladda Shiinaha FEI Shengchao, ayaa maanta si rasmi ah looga giddoomay waraaqaha aqoonsiga danjiranimo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Midowga Yurub iyo Dowladda Shiinaha ayaa Soomaaliya u soo magacaabay danjirayaal cusub, kuwaas oo kala ah Tiina Intelmann, oo ka socta Midowga Yurub iyo FEI Shengchao oo ka wakiil ah dowladda Shiinaha.
Marwo Tiina Intelmann, waa diblomaasi u dhashay dalka Estonia, waxay ahayd Wakiilka Joogtada ah ee Estonia u fadhiya Qaramada Midoobay (New York) intii u dhaxaysay 2005 ilaa 2011, waxay soo noqotay Madaxa Ergada Midowga Yurub ee Liberia. Tan iyo 2017 waxay ahayd safiirka Estonia ee Boqortooyada Ingiriiska.
Diblumaasiyaddan, ka socota dalka dhaca xudduudka Badda Baltic iyo Gacanka Finland, (Waqooyiga Yurub), ayaa sidoo kale soo noqotay Guddoomiyaha Golaha Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada, waxayna badeshay Nicolas Berlanga, oo dabayaaqadii bishii hore uu sagootiyay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble.
Dhanka kale, Danjiraha cusub ee Dowladda Shiinaha FEI Shengchao, ayaaa badaley Qin Jian, oo lagu xasuusto inuu taageero la garab taagnaa nidaamkii waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo hogaaminayay, si maamulka Xi Jinping, uu dalka uga leexiyo wadada dimuqraadiyadda ee reer galbeedku maalgaliyeen.
In ka badan 600 oo sano ka hor, bad-mareenkii caanka ahaa ee Shiinaha ZHENG He, ayaa yimid Soomaaliya, wuxuuna cagta mariyay Muqdisho, Saylac, Maka iyo Berbera, intii uu ku jiray safarradiisii badda ee Bariga Afrika. Xorriyaddeedii ka dib, Soomaaliya waxay ahayd waddankii ugu horreeyay ee Bariga Afrika ah oo xiriir diblomaasiyadeed la yeeshay Shiinaha.
Intii lagu jiray xilligii Dagaalkii Qaboobaa, dawladda Soomaaliya waxay xiriir dhow la lahayd dhiggeeda Shiinaha. Mas'uuliyiinta Soomaaliya ee xilligaas ayana u ololeeyay in la joojiyo go'doomintii diblomaasiyadeed ee Shiinaha, waxayna Dowladda Soomaaliya hormuud u ahayd dalalkii Africa ee Shiinaha ka caawiyay ku biirista Qaramada Midoobay.